About Us-Ihotele eNtofontofo kwetephu umenzi
Armati-- China kwetephu fektri eNtofontofo Hotel Project.
Armati bath yentsimbi, umvelisi okhokhelela ophezulu-grade brand ucoceko kwiindawo Asia-Pacific Region. Siya kuba lokuhlambela yezityalo imveliso kwetephu sekhompyutha in Southern China Jiangmen isixeko (Heshan) sibe nakho acquird yamahlakani lemveliso waseJamani. kusasa ukusuka 1966 siya kubandakanya kwishishini kuyilo lokuhlambela, ukuqala 1990s phakathi, siqale kwetephu nakwibhafu kushishino lwemveliso kufanelekile, ngokulandelelana ngokweendidi imveliso Foshan and Heshan City.Our zibandakanya zodidi isiphelo high kwetephu, kwihotele lokuhlamba izincedisi hardware, inkqubo isiphango ihotele, zokugungxula yangasese isivalo, oluzenzekelayo isivamvo kwetephu, nezipheleleyo kakhulu yokwemfuneko ilitye elibe lokuhlambela ingamampunge bathtube.
Amati lokuhlambela sele abe liqabane lemveliso OEM elelesiJamani ezininzi eyaziwa kakuhle lophawu Italian, kuquka edumileyo kakhulu Dornbracht, Grohe, Hansgrohe, KWC, Gessi, Zucchetti njalo, ngamanye amaxesha sivelisa esipheleleyo, maxa kubonelela ngeentsimbi components.With kwizinga eliphezulu iimveliso ophezulu ngokuthelekisa ixabiso resonable, siye zatsala ngempumelelo enkulu inkwenkwezi ezintlanu-Hotel Management Group e i-Asia-Pacific Region kunye abe liqabane lethu ixesha elide, ezifana Kempinski, Sheraton, The yelo kunye ezininzi. (Khangela zilandelayo hotel Armati mzekelo kwiprojekthi yophando)
Xa kurhwebo lwasekhaya Chinese, siya kugxininisa kwakhona kwiprojekthi Imotel Indawo market.All yethu umhambisi wephondo kwakhona ngomzi ezisemthethweni GROHE/ HANSGROHE/ DORNBRACHT Wasenza kwakhona nomboneleli superstore inkulu ehlabathini ezifana Walmart,The weziSetyenziswa ekhaya, Khadijah yakhe, singathanda ukuba enze isabelo yethu kurhwebo lwamazwe kwicandelo Ihotele kwimarike zodidi. (Khangela zilandelayo case study Armati iprojekthi kwihotele ekhaya nakumazwe aphesheya)
Njengoko yentsimbi kumvelisi ezingaphezu kwama 20 iminyaka yamava, thina yonyuka inani elikhulu ngumngundo yesimbo kwetephu ezahlukeneyo shape.Partner kunye umyili Italian kufuneka 38 uthotho kwetephu 16 uthotho izincedisi bath njengoko range.But wethu umgangatho kufuneka 30% ishishini yasekhaya ilungeniselo ngokwesiko, kwaye> 50% yoshishino yamazwe njengoko OEM imveliso elicwangcisiweyo. (Khangela zilandelayo Armati kwetephu lokuhlambela lwezincedisi yezinto zokufunda ezifumaneka)
Sicebisa ukuvelisa kwetephu eyodwa ngokuba wonke umyili Lowo amaphupha neminqweno! Sinikela MOQ ephantsi imveliso OEM, sinako kuzise yokwemfuneko kwetephu ngenxa yenu yeprojekthi ngokukodwa. mnamagine ukuba umlimi nale umgangatho ezisemgangathweni HANSGROHE, GROHE ungenza kwetephu accroding iingcinga zenu, imizobo, okanye imifanekiso, nexesha nelothe iintsuku 10 kuphela 4 iiveki. (umzekelo yethu yakutshanje kuyilo ingcamango ukuya esiphelweni imveliso ngobuninzi iintsuku 45 kuphela) . Oku kuya kuba esisodwa, yokubethelela engcono inaso umyili ngayo italente, ukusekwa kukutyhalele isandla ayiliweyo ibrendi. Kanye odumileyo kakhulu Starck UPhilippe. (Khangela apha Armati Isiko kwetephu ngenxa hotel case study)
1) Ndingathanda ukwazi imbali Amati, Ingaba inkampani Chinese okanye eyinkunzi eziphantsi kwinkampani angaphandle, yaye yintoni ubudlelwane phakathi inkampani yaseJamani?
Siya iqela multi-national, isiseko imveliso yethu equit kunye lwemveliso laseTaiwan nolawulo knowledge.We wafumana isityalo eJamani ezineminyaka namava ware.We zococeko waqesha imveliso Italian umyili ukwenza eyakho model.We wethu zombini yaseTshayina German.In le kurhwebo Chinese zasekhaya kunye kwimarike yamazwe ngamazwe, sisebenzisa Amati njengesikhuni imveliso zococeko.
2) ndingathanda ukwazi ngaphezulu kwesiseko lwemveliso yakho, ezifana indawo ekwakumi, indawo, abasebenzi kunye QC, kwakunye nobukhulu yakho zamashishini, njlnjl?
yezityalo imveliso naphakathi kunye square 10000 manzi 150 worker.We kujoliswe kuyo inkoliso isiphelo ophezulu kwimarike projekthi ezintlanu Iinkwenkwezi Hotel, kunye nezenzo olukhulu sinento kule abathengi market.Our ziquka Hotel and Interior ingcibi, ikontraka, umphuhlisi (ikakhulu kuphela umsebenzisi), retail nokuhanjiswa ayikho priority.We wethu ukuphumeza imveliso JIT style.In 2015, yethu kwimarike Chinese turnover ibekwinkxalabo USD 12 million, kuba yonke ingeniso ishishini ngokuqinileyo ukuya 35 million USD.
3) njani ngokusesikweni kwetephu? Ndiya kuba projekti enye kuphela icala, mna cela ukuba ngokusesikweni kwetephu?
Kufuneka 50% kwemveliso kumazwe umxhasi yenza ikulungele kwetephu, khangela apha ukuze ufumane iinkcukacha.
4) kwetephu zakho isiphelo high-,-star ezintlanu Ihotele kwibakala, ndingathanda ukwazi ngokweenkcukacha, Ngaba zazise nto?
Sisebenzisa arcade games ngobhedu ukwenza kwetephu nesingxobo nonyango umphezulu iteknoloji efanayo umgangatho isiJamani, Thina umjelo wokungenisa icandelo quality ezifana Kereox iCartridge iceramic kunye NEOPERL libiza. (khangela apha Armati imveliso kwetephu iinkcukacha)
5) Ngaba nisondeze Ihotele lokuhlamba yohambelwano, impahla ngokubanzi?
Ngokuqinisekileyo, sivelisa lokuhlambela sekhompyutha in zifana nobhedu kwetephu, izincedisi lokuhlambela, ishawari manqaku, kwaye inkunkuma ebhafini, sikwanazo ilitye ingamampunge iisoyi kunye ebhafini ukuba abambisane. Wyayazi yonke lokuhlambela ehotele iyodwa, ukulandela ngqo lokusingqongileyo, dimensions ihotele ukuba ukuyila ngamnye fitting.Sometimes lokuhlambela, ukuthenga kraca ezaziwayo-kakuhle lokuhlambela kufanelekile, akanako ukulungiselela izibonelelo zococeko yengingqi specification yakho. Kubhetele ukufumana amava, umgangatho siqinisekiso umenzi elicwangcisiweyo basebenzisane, ukugcina isiqhamo sobugcisa nezoqoqosho, Ukuba wonke nje usebenzisa imizekelo ekhoyo lophawu, akukho mfuneko yokuba kubekho umcebi.
6) Uphi na isiseko lwemveliso yakho, ndiya kunivelela isityalo sakho eTshayina?
isiseko sethu imveliso emazantsi e China Jiangmen isixeko (Heshan), Guangdong province.We wamisa ofisi Shenzhen ngenxa kurhwebo lwasekhaya, kufuneka Showroom esixekweni downtown.Welcome ukuya kutyelela isityalo ethu ukuze nixoxe imfuneko yakho projekthi. Ngamanye amaxesha 1 okanye 2 iintsuku ubuso kwintlanganiso yobunyani ukusombulula ingxaki kakhulu ngaphezu ezininzi zonxibelelwano nyanga email.
(Khangela apha yezityalo imveliso Armati kunye neenkcukacha imveliso)